Oakleys ruru ego ahụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Oakley ubi jaket nyocha - ihe ngwọta nye nsogbu
Oakley ubi jaket nyocha - ihe ngwọta nye nsogbu
Oakleys ruru ego ahụ?
Dị ka ị pụrụ ịtụ anya na a okomoko ika, price nkeOakleyugogbe anya maka anwụ nwere ike ịgba obere ntakịrị. Ezigbo ụzọOakleysga-eme ka ị laghachi n'agbata dollar 100 na 200. Ma ọ bụrụ na ị na-eche ma ha bụkwesịrị ya, azịza ya zuru oke.Mar 30 2021
Ọ bụrụ na ị zụtara iko n’oge na-adịbeghị anya, anya gị mepere mgbe ị hụrụ ọnụahịa ego. Ọ bụrụ na ịgaghị ebe dịka Wal-Mart ma ọ bụ Costco, ị nwere ike iji ọtụtụ narị dollar mebie otu ụzọ efu $ 30 10 afọ gara aga. Na-ekwu maka mmami mmado.
Ma ọ dịghị ka ihe agbanweela nke ahụ, ọ bụ obere plastik ma ọ bụ waya, ụfọdụ kposara, na iko mejupụtara ha. Gini mere iko ji eri ihe karie iPad? Otu ọsịsa bụ na otu ụlọ ọrụ na-achịkwa nnukwu ụlọ ọrụ. Otutu azụmaahịa.
Enwebeghị nhọrọ dị ukwuu. Igwe Ray-Ban. Oakleys.
Iko maka ịgba ọsọ na ịgba ọsọ. Na ọbụna na-agụ. Breatdị agba dị iche iche na-ewu ewu.
Ga-eche na asọmpi ahụ ga-eme ka ọnụ ahịa daa. Lee anya na. Otu ihe kpatara nke a bụ ụlọ ọrụ Italiantali a ma ama nke ukwuu ma akpọkwa Luxottica.
Ọ bụrụ na inwere iko ma ọ bụ ugogbe anya dị mma, ha nwere ike ịnwe ha. Luxottica bụ nnukwu ụlọ ọrụ anya na ụwa. Ọ na-ezere mgbasa ozi.
Mana onye isi ụlọ ọrụ Andrea Guerra kpọrọ anyị ileba anya. O meghere anya gị. You nwere ihe ọ bụla echiche mmadụ ole na ụwa na-eyi ugegbe anya gị ugbu a? Ọ dịkarịa ala ọkara ijeri na-eyi ugogbe anya anyị.
Luxottica malitere ebe a dị ka obere ụlọ ahịa na Agordo. otu ebe na obodo di na Alps nke Italy mgbe eji mpi ewu ewu mee osisi. Nke ahụ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na 1961, otu a ka o si dị taa.
N'afọ gara aga, Luxottica mepụtara ihe dị ka nde ugogbe anya anwụ 65 na ugogbe anya. Ha anaghị eme iko. Anyị hụrụ ugwu na ugwu ugegbe na igbe dị na China.
India. Brazil. Karịsịa na USA.
Ma ha dị oke ọnụ. I nwere ike ịbụ. Dị oke ọnụ.
Ị nwere ike. Mana nke a bụ otu n’ime ihe ole na ole dị arụ ọrụ 100%. 100% aesthetic.
Ha kwesiri ikwekọ n’ihu gị n’awa iri na ise n’ụbọchị. Ọ dịghị mfe ma enwere ọtụtụ ọrụ n’azụ ya. Onye njikwa Luxottica Isabella Sola.
Kwupụtara na ụlọ ọrụ ahụ na-eme mgbanwe. Kedu ka anyị si ahụ enyo anya. Think chere na m dị mma Ee m chere.
Echekwara m na m dị mma. Ọ bụ n’oge na-adịbeghị anya iko anaghị ajụ oyi. Ha na-eyi ha naanị mgbe ọ dị mkpa.
Enweghị m ike icheta mama m gwara m na ọ bụghị ọtụtụ afọ gara aga na ụmụ nwoke agaghị ajụ m ma m eyi enyo anya m. M kwesịrị ikpu ìsì. oru ma oburu na ichoro.
Mana Luxottica weere ngwaọrụ ahụike a. Ma gbanwee ya ka ọ bụrụ akwa ejiji. Site mmechi amụọ chepụta na ike dị elu, nkecha stains maka fọrọ nke nta ka ọ bụla ika na labeelu i nwere ike iche n'echiche.
Anyị nwere Prada, anyị nwere Chanel, anyị nwere Dolce Gabbana, anyị nwere mmejọ, anyị nwere Burberry, anyị nwere Ralph Lauren. Anyị nwere Tiffany, anyị nwere Bulgaria. A naghịzị akpọ ha ha iko, kama ha bụ mkpuchi anya.
Ndị mmadụ ọ ka na-eyi nke ahụ mgbe iko mechara bụrụ ọla achọ ha? Luxottica nwere ike ịrịọ maka ozi dị egwu. Ma ịmara ihe m maara na enwere ụfọdụ. Igwe ndị dị ọnụ ala dị ka ndị dị oke ọnụ.
landis ịnyịnya ígwè
Iji maa atụ, nke a bụ akara Vogue gị, nke na - adịghị ọnụ ọnụ, nke a bụ Koochi. Nke dị oke ọnụ karịa. Mgbe ụmụ nwanyị abụọ soro ya n'okporo ámá.
Ee, ha dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ. Ọ bụghị otu ihe ahụ. Abụghị otu n'ihi nkọwa nke etiti dị ka ntakịrị nke Chanel C's.
Polo ponies. Ma ọ bụ tiffany acha anụnụ anụnụ. Luxottica agaghi agwa anyi na ndi oru ha nwere ike ree ihe ruru ugboro iri abuo nke imeputa ha dika iko.
Ọ bụ Luxottica mere klas niile. Yabụ ị mebere ọtụtụ puku iko, nke ahụ bụ ihe anyị na-eme, ee, ebee ka Tiffany si abanye. Tiffany na-abịa n'ụzọ ọ bụla.
Fashionlọ ejiji na-ezipụ eserese nke nchịkọta ọhụrụ ha dị ka mmụọ nsọ. Na ala n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe ị nwere ike ịhụ ọrụ na-abanye na ọdịiche dị iche iche. Ndị na-ehicha plastị dị ọcha gafere site na igwe varning wee pụta na Versace.
A na-etinye nkume na Dolce Gabbana otu otu. Na akpụkpọ anụ ejiri nlezianya kpoo maka anya 'Chanel bag'. Mgbe ndị mmadụ bidoro mara iko ndị a Chanel.
Ezubere site na Luxottica. Ọ ga-agbanwe ụzọ ha si eche banyere iko Chanel. Know maara nke ahụ ga-abụ kpam kpam ihe ọjọọ.
Nke ahụ ga-abụ nzuzu. Mana gịnị kpatara na akpọghị Luxottica? Na-ezo akara ika na agbanyeghị.
Zoo ya? Eeh. Edeghị anyị na New York Stock Exchange ma ọlị, ebe ngwaahịa Luxottica na-arị elu. Companylọ ọrụ ahụ nwetara $ 8 ijeri n'afọ gara aga, mana onye na-ere ahịa ya abụghị ụdị ejiji ejiji.
Ọ bụ akara ha nwere nke ọma, Ray Ban. Nke Bosch bu nke emebere ya ma zubere maka ndi agha US ogologo oge kemgbe JFK, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Onye isi ala ọ bụla yiri ya. Tohapụ ikwu Tom Cruise na Business Risky. .
Na ngwa agha kachasị elu. Mana njikwa ahụ nke ọma, belata ọnụ ma mesịa tinye ya maka ire ere. Ndị boughttali zụtara ya na 1999.
Ma nwee usoro iji gbanwee ihe. Anyị kwụsịrị ire ugogbe anya Ray Ban maka otu ma ọ bụ ihe na-erughị otu afọ. Ọ bụrụ n ’zụrụ ya, ị ga - azụta ya maka na amaghị m obere ego, $ 29 na ụlọ ahịa ọgwụ na ọdụ mmanụ.
You wepụrụ ya n’ahịa. Anyị emezigharịrị ihe niile. Wee bulie ha elu.
Taa, ndị na-akwụ $ 29 ahụ nwere ike iri 150. Na ndị ọzọ. Ray Ban bụ akara ugogbe anya anwụ kacha mma n'ụwa.
M nzọ ma ọ bụrụ na ndị America ịzụta ndị a iko. 99%. Chee na ị na-azụta akara America. 'Ọ bụ ihe American ika ihe na-ezighị ezi na ya.' Echere m na ọ bụ akara America nke ndị bytali nwere.
Echere m na ụwa bụ na. Ọ bụ ụwa ma anyị amataghị na ọ bụ ihe ahụ. Tupu m bido rụọ ọrụ na akụkọ a, anụtụbeghị m banyere Luxottica Yeah.
Nke bu ihe itughari karie na Luxottica azughi Ray Ban. Ha zụtara LensCrafters. Ndị kasị ibu eyewear mkpọsa yinye na North America.
Ugbu a ha mere ya ma ree ya. Ọ dị mma maka azụmahịa, mana ọ dị mma maka ndị na-azụ ahịa. Ajụrụ m Mark Weical, Onye isi ala LensCrafters, ole ka Luxottica dị.
Dị ị na-ere ebe a? Ikekwe anyị nwere ìgwè ndị agha na-abụghị Luxottica. Karịsịa Luxottica, ee. Yabụ ebe ọ bụ na Luxottica nwere gị.
Ndị na-azụ ahịa ọ na-enwe ezumike na iko si n'aka gị na LensCrafters? Ihe ndị ahịa a natara na LensCrafters bụ ọtụtụ ọrụ na ngwaahịa dị iche iche, gụnyere oke a. Okpokoro, Mark, ị naghị aza m ajụjụ m. M na-arịọ gị ma ọ bụrụ na ị na-ana obere maka osisi si Luxottica n'ihi na ha bụ otu ụlọ ọrụ.
Echere m na onye ọ bụla na-asọmpi na ụlọ ahịa anya na-ekpebi ego ya. Ihe ọ bụla akara ha si. Nke ahụ bụ mba.
Ndị ahịa anaghị enwe ezumike na LensCrafters, ọnụ ahịa ọnụ ụzọ okpokolo agba na anya m dị ihe dị ka $ 300. may nwere ike iche na enwere nhọrọ nke iko ndị ọzọ na nnukwu ụlọ ahịa ahụ. Mana ọ bụghị naanị na Luxottica nwere agbụ ndị na - eduga ntutu nke mba ahụ, o nwekwara isi ihe ọzọ, Pearl Vision.
Na Oliver Peoples na ọtụtụ agbụ boutique. Na Target Optical na-agba ọsọ. Na Sears Optical.
Emebeghị anyị ma Luxottica nwekwara Sunglass Hut, ugogbe anya maka anwụ kachasị na ụwa. Yabụ enwere ahịa n'efu maka iko? Mba, echeghị m na ọ dị adị n'ezie. Echere m na ụlọ ọrụ nwere.
Nchịkwa gabigara ókè nke ahịa. Bret Arens, onye na-ede akwụkwọ maka smart money.com, kwuru, sị: 'Ọdịdị dị iche iche bụ echiche efu'.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ dịka ịmara na ọ dịka asọmpi mgbaaka ọkachamara na asọmpi adịgboroja adịgboroja. Chee echiche banyere ihe mere Oakley. Onye ama ama ama ama n’uwa n’egwuregwu.
Oakley bụ nnukwu onye na-asọmpi ma ha na Luxottica nwee esemokwu. Luxottica kwukwara na anyị na-atụfu gị n'ụlọ ahịa anyị. Ha jụ ire iko ha.
Ọ bụ arụmụka ọnụahịa. Ha wepụrụ Oakley n'ụlọ ahịa ma ọnụ ahịa ngwaahịa Oakley dara. Kedụ ka Oakley kwesiri ịbịakwute ndị ahịa mgbe ha na-enweghị ike nweta ugogbe anya maka anwụ? N'ime ugogbe anya maka anwụ? E nwere ụfọdụ nsogbu dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ.
Mmalite 2000s. Ma ha abụọ ghọtara na ọ ka mma ikere òkè. Mma ka ha zụọ.
Agaghị m ekwu nke ahụ. Anyị lụrụ Oakley na 2007. Oakley zụtara.
Ha gbalịrị ịsọ mpi ma ha tufuru ma ị zụtara ha. Aghọtara m tiori gị, mana ha ghọtara na ndụ jikọtara ọnụ ọzọ. Ugbu a Luxottica nwere ụgwọ abụọ kachasị elu site na aha ụwa ikpeazụ, Ray Ban na Oakley.
Mana Luxottica gosipụtara na enwere ndị egwuregwu ndị ọzọ. Onye onye ndorondoro kachasi na United States. I nwere ike ịsị Wal-Mart.
Costco kwa. Na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị dị ka Warby Parker. Mana ndị asọmpi ndị ọzọ agwala anyị na Luxottica nwere ha na ndị ọbịa.
Mgbe ị na-eme iko onye ịchọrọ ịbụ na ụlọ ahịa ha. Ma ọ bụrụ na ha nwere ụlọ ahịa, ịchọrọ ire Ray Bans. Ya mere Luxottica nwere ike ịtọ ọnụahịa dị ka ọ chọrọ.
Luxottica bụ. onye a na-akpọ ọnụahịa. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịtọ ọnụahịa na ndị ọzọ ga-agbaso.
Ọ bụ ya mere iko ji na-akwụkarị ụgwọ na saịtị ahụ, ọ na-ekwu. Isi ihe dị iche iche dị oke ọnụ bụ iji mee ka ndị mmadụ kwụọ ụgwọ. $ 200 maka ngwa ahia ruru $ 30 iji mee.
Ma ka m gosi gi ihe. Kedu ihe dị iche na akpụkpọ ụkwụ m. Ọfọn, ruo n'ókè ụfọdụ, e nwere ọtụtụ atụnyere.
Ihe dị iche bụ na ọ bụghị ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ niile ka otu ụlọ ọrụ na-arụ, ọ bụghịkwa ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ niile nwere otu ụlọ ọrụ ahụ. Would ga-eche na ụlọ ọrụ inshọransị na-ekpuchi ọhụụ ga-eme mkpesa. Mana mara ihe, Luxottica nwekwara atụmatụ enyemaka nke abụọ kachasị ukwuu nke mba ahụ, IMed.
Kpuchie anya anya na iko. Kedu ihe ị nweghi Ọtụtụ ihe. Ọ bụchaghị.
Gịnị ma ị kpọkọta ihe niile n'okpuru otu aha? A otutu - ọ bụghị n'ezie - ị dị ka n'ezie, gịnị ma ị jikọta ihe niile n'okpuru otu aha? Echere m na ndị mmadụ hụrụ ọdịiche dị iche iche n'anya. Ndị mmadụ nwere ụdị ụdị dị iche iche. Ndị mmadụ nwere ahụmịhe dị iche iche.
Ọ bụ echiche efu nke ịhọrọ. Mgbe ị si n'otu ụlọ ọrụ oge niile. Echere m na nke a bụ kpam kpam ihe ọjọọ.
Ajụjụ bụ nhọrọ ndị ndị ahịa nwere? Ọ bụghị ajụjụ banyere mmadụ ole ka ị nwere. Kedu otu onye na-eri ihe si erite uru na ihe a niile? Ọnụahịa ha ka dị elu. Ọ bụrụ na ị gara ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ, ị ga-ekwu na ọnụahịa ha dị elu? Na-agwa m na ọ ruru ego niile.
Ihe ọ bụla bara uru ihe ndị mmadụ dị njikere ịkwụ. You makwa ihe? Ọ bụ eziokwu. O yiri ka ndị mmadụ hà dị njikere ịkwụ nnukwu ego.
M nzọ ha na-eri a uba. Ha adịghị oke ọnụ. Ha ruru ihe ruru $ 400.
Site na anya anya ọgwụ, ọnụahịa nwere ike ịrịgo 600. Ma ọ bụ karịa.
Oakleys dị mma?
Ọbụghị naanịOakleysnkecha naelun'imeogo, ma ha dịkwa mma maka anya gị. Naanị ezigbo ihu ala nke ụzọ ụzọ abụọOakleysbụ ịnye ọnụahịa. Ugogbe anya anwụ ndị a na-achọkarị ọnụ ahịa, ọ nwere ike isiri gị ike ịchọta ụdị ọnụahịa dị ọnụ ala ebe ịchọrọ ya. g.
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa, ịnabata ọwa. Ana m atụ anya nyocha ngwaahịa taa. Ọ bụ ihe m na-eji kwa ụbọchị ma enweghị m ya, ana m apụ apụ.
Anyị na-ekwu maka ugogbe anya maka anwụ. Taa, anyị ga-enyocha Oakley Gascans, Oakley, Holbrooks, na ElementActive clip-on ugogbe anya maka anwụ. Nke a bụ Kim si Mish na Kim ebe anyị na-anwa ị mata banyere mmerụ ụbụrụ ụbụrụ site na nyocha ngwaahịa, ahụmịhe nke onwe, wdg. Otu post n'otu oge.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ọ bụla anyị ga-enyocha taa, aga m ahapụ njikọ na igbe nkọwa dị n'okpuru. Ngosipụta ngwangwa, ị bụ njikọ njikọta; Obere ọrụ anyị natara ka akwadoro ọwa a. Kedu ihe m, onye lanarịrị TBI, na-achọ maka ugogbe anya maka anwụ? Number otu: ọchịchịrị tint.
Maka ụbọchị na-enwu gbaa na anwụ na-acha na-acha anụnụ anụnụ n'ime ụlọ, tint ga-abụrịrị ọchịchịrị. Nọmba 2: polarization. Achọrọ m belata nchapu site na ihe ndị dị kwa ụbọchị dị ka enyo na iko ma eleghị anya, mmiri.
Nọmba 3: imepụta niile. Ikwesiri belata mbelata ọkụ site na elu na akụkụ nke iko gị. Na nọmba 4: nkasi obi.
Ekwesịrị m iyi ndị ọjọọ a kwa ụbọchị. Ka anyị malite na nyochaa. Ah, enwere m ike ịhụ gị.
Aghaghị m ịgbanwe uwe m ka ihe dị iche na ugogbe anya maka anwụ na uwe elu m ka mma ka ị wee hụ nke ọma. Mana nke mbu bu akpu Oakley gas, BAM. Isi okwu m maka afọ 5.
Enwetara nke a ozugbo m nwesịrị ihe mberede. Ha na-emezu ihe niile m chọrọ maka nghọta m na ìhè. Nọmba 1 gbara ọchịchịrị.
Ndị a nwere nwa Oakley iridium tint. Ekwenyere m na ọ bụ otu n'ime ọchịchịrị dị, 10% nnyefe ọkụ. Number abụọ, polarization.
bụ ahụike dị mma
Iji belata nchapu ọkụ a. Number atọ: mma. Ihe ndị a dị mma.
Enwere m ike iyi ha ụbọchị niile kwa ụbọchị. Ọzọ ọkacha mmasị m maka afọ ise gara aga na ịmịnye ọkụ, ọ bụ imepụta gburugburu niile ka obere ọkụ wee banye site na elu na ugogbe anya maka anwụ ma dịkwa ka nchedo UV 100% UV na-enye ekele maka anya Plutonite si Oakley. Onye ọsọ ọsọ Na-agagharị na imewe.
Asụsụ eserese siri ike nke iko ma ọ bụ ihe dọtara m na ya. Ana m enweta ekele dị ukwuu maka iko ndị a. Nwere ike ịhụ nhazi rim zuru ezu na iko.
Na n'akụkụ ogwe aka ndị a kpụrụ akpụ nke mere ka ọ dị ezigbo mma ịhụnanya ugogbe anya maka anwụ ndị a A na-ahụta ugogbe anya maka anwụ maka ndụ a kwa ụbọchị Agaghị m atụle ha maka ojiji kwa ụbọchị Ọ bụrụ na ị gbajie ọsụsọ. Ha na-amalite ịmịpụ, lee anya iko ndị a. Ejila n’elu mmiri.
Di na nwunye mbu m nwuru n’oké osimiri. Anọ m n'ime mmiri wee lelee anya na azụ m na ebili mmiri ahụ m kụrụ ma ha fepụrụ ma enweghị m ike ịhụ ya. Aga m akwado njide ugogbe anya maka anwụ.
M na-eji otu n'ime Kra. A na-atụ aro ya nke ukwuu na m ga-ahapụ njikọ na igbe nkọwa dị n'okpuru ka ị ghara ida ugogbe anya maka anwụ gị ndị a bụ Oakley Gas Can Black Iridium Polarizing Lenses Na-esote bụ ụzọ ọzọ nke Oakley Gascans mana ndị a nwere anya mpekere prism Lee anyị na-aga nke a bụ ya. Ekwesiri m ịhọrọ ụmụ okorobịa a ka m hụ ihe teknụzụ prism a bụ.
Teknụzụ prism na-ejikwa anya m na-ejikwa agba nke gburugburu gị iji nye ọdịiche dị omimi na agba miri emi. Wdg wdg ndị a bụ ndị nwa prism kwa ụbọchị anya m.
Ha na-abịa na anya prism maka snow, ụzọ ụkwụ, ịnyịnya ígwè, wdg. Ndị Gascans anaghị abata na lenses niile a, mana ana m akwado ịlele Oakley.com iji lelee nhọrọ gị niile.
Ya mere, ndị a dị mma. Ahụrụ m ndị a n'anya, ana m ahọrọ ha karịa iridiums ojii m. M na-eyi ha kwa ụbọchị ugbu a.
Ndị a bụ ugogbe anya maka anwụ Oakleydaily Prism Black, na-esote Oakley Holbrooks, nke nwere anya iridium ojii. Ahụrụ m ụmụ nwoke a n'anya. Enwetara m ihe ndị a mgbe gasị m nwere iko iridium ojii.
Ndị a nwekwara anya iridium ojii, mana ndị a na-ahụta dịka usoro kpochapụla oge. Enwere m ihe ndị a n'ihi na ha dị ntakịrị na ihu ma nwee ntakịrị ume. Site na gascans ị nwere ike ịrụ ọrụ ọsụsọ, na ọkpụrụkpụ nke imewe ahụ na ngwugwu ihe mkpuchi nke a abụghị n'ezie ihe mkpuchi, ọ meghere emepe, ụlọ nsọ ahụ dị gịrịgịrị.
Yabụ, ọ bụ otu n'ime ugogbe anya anwụ, ugogbe oge na-enweghị oge ị nwere ike iyi kwa afọ, ọ gaghị apụkwa n'ụdị, ka anyị gaa ije ngwa ngwa, mara ụfọdụ ihe nrịba ama dị n'akụkụ akwa ahụ, lee nhazi ebe ụlọ nsọ ahụ zutere n'ọnụ Nke a abụghị ihe dị mkpa a chọrọ gburugburu niile ndị a bụ ezigbo ọkụ na mmiri M nwere ndị a dị ka ihe ọzọ maka gburugburu ebe dị iche iche na ikuku ikuku na ikuku ma ọ bụ na ihu A na-ejikwa iko a mee igwe ma ha dịkwa dị ka prism iko nwere anya lele anya prism ọzọ na Oakley.com the nhọrọ ndị a bụ ndị Oakley Holbrooks nwere anya iridium ojiiOsote na-abịa ElementsActive polarized clip-na ugogbe anya anwụ Lee ha nọ ebe kwesịrị ekwesị. Kemgbe m nwere iko ọgwụ mgbochi Achọrọ m ụzọ dị ọnụ ala iji belata anyanwụ Anwụ na-acha anyanwụ na anya m na nchapụta nke anyanwụ Ya mere achọtara m ndị a na Amazon maka ọnụ ala ha dị ntakịrị nzuzu. gị, mana ha na-eme ya ọfụma, naanị m na-eji ha anya ụgbọ ala, mana ihe dị mma bụ na ị nwere ike ịdọkọta ha.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọghị haYeahYeah, dị ka Dwayne Wayne si ụwa ọzọYeah, ị nwere ike kechie ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha Nwunye m hụrụ n'anya nke a gbasara m Mejọọ mmetụta m Y na-ekewa. Ha na-egbu egbu ma na-eguzogide ọkọchị ka ị nwee ike itinye ha n'akpa gị ma ha agaghị emebi; Ha ji ikpe na visor clip bịa. Ndị a bụ ElementsActive clip-on ugogbe anya maka anwụ na teknụzụ ntụgharị -Okai Jung ajụjụ nke ụbọchị ahụ, olee uwe ị masịrị ojii ma ọ bụ uhie? Hapụ ihe ị kwuru n’okpuru ebe a.
Achọrọ m iyi oji, mana achọrọ m iche maka ugogbe anya maka anwụ. N'eziokwu, ajụjụ nke ụbọchị: Gịnị ka ị na-eme maka nghọta gị na ìhè? Ugogbe anya maka anwụ? Ọ bụ okpu? Ọ bụ iko Ha na-akpọ ya. Ọ ga-amasị m ịnụ ihe ị na-aza.
Ọ ga-amasị m ịnụ ndụmọdụ gị Biko kwuo okwu n'okpuruNke a bụ nyocha m maka ugogbe anya anwụ ndị a Achọrọ m anya m mbụ Oakley ojii Iridium lenses Ma mgbe m nwesịrị prisms ndị a ihe dị ka otu izu, ahụrụ m ọdịiche ahụ n'anya n'ụzọ zuru ezu na ha dị mfe n'anya m ọhụụ ọhụrụ -na maka ugogbe anya maka ubochi. Agbanyeghị ma ị na-ewe iwe ma ọ bụ na ị naghị ewe iwe, ana m akwado ịga ahịa ahịa Sunglass nke obodo gị. Gwa onye otu na-arụ ọrụ ka o nyere gị aka ịnwale ọtụtụ iko.
Gbalịa ha n'ime ụlọ ahịa ahụ Lee otu ha si eji ọkụ ọkụ dị n'ime ụlọ arụ ọrụ; jụọ onye ọrụ gị ma ị nwere ike ịkpọrọ ya pụọ ​​n’èzí. Ọtụtụ mmadụ amaghị na ị nwere ike. Hụ otu ha si arụ ọrụ site na ịmịnye ọkụ na mbelata ọkụ yana ịkọwapụta maka nchapụta.
Ma ee, ana m akwado ịga ụlọ ahịa ugogbe anya maka anwụ gị. Echere na ị masịrị isiokwu a. Mgbe ị hụrụ nyocha ngwaahịa m ndị ọzọ, ana m eche nche maka ngwaahịa kachasị ọhụrụ na nke kachasị mma iji nyere aka na mgbaàmà TBI m.
Daalụ maka ikiri. Ọ bụrụ na ịnwebeghị, echefula ịdenye aha na anyị ga-ahụ gị na isiokwu na-esonụ. Udo! Enweghị nsonaazụ ụda? Chọghị nsonaazụ ụda? Enwere m ike ime ya n'onwe m.
Ọ dị mma, anaghị m eji nsonaazụ onwe nke onwe ma a bịa na nsonaazụ ụda. - Nwaleenụ ugogbe anya maka anwụ. Nwoke, achọrọ m ịsụ nsụ, ọ bụghị ya? Ule zigara testicles. Ọgwụ!
Kedu ụdị ewu ewu maka ugogbe anya maka anwụ nke Oakley?
Flak 2.0 XL bụIsi Oakley-re egwuregwuugogbe anya maka anwụmakaeziihe kpatara. Ọ dabara n'ụdị dịgasị iche iche nke isi na nha ma nwee ụdị egwuregwu ọ bụla ị ga-achọ.Ọgọst 4 2020
Otu Mgbasa Ozi bu oke akuko nke Oakley mere n’oge na-adịbeghị anya. Ọ bụ echiche a na-emetụta ọtụtụ n’ime anyị, ọtụtụ n’ime anyị, egwuregwu anyị họọrọ. Mana ọtụtụ n'ime anyị na-eche Oakleys kwa.
Otu onye na-akọrọ igbe ahụ bụ Brian Takumi. Ọ rụla ọrụ ebe a afọ iri abụọ na otu ugbu a. Ọ bụ VP nke Brand Creative ma dee akwụkwọ ahụ na Oakley n'ụzọ nkịtị.
Ọ ga - akpọrọ anyị gabiga asaa kachasị mma, ndị anyị hụrụ n'anya, na ndị kachasị mkpa Oakleys oge niile. (egwu dị egwu) Ọ dị mma, ana m atụ anya ya. Anyị nwere ike ịhapụ uzuoku na ugogbe anya.
Anyị nwere n'ihu anyị nhọrọ nke ihe ị chere bụ ihe kachasị mkpa ma ọ bụ ọkacha mmasị gị Oakley eyewear niile oge. Ebee ka anyị ga-amalite? - Echere m na ihe mbụ anyị mere bụ ịmalite na mmalite nke Oakley na ugogbe anya maka anwụ na nke ahụ bụ nku anya. Echere m na n’enweghị na ị gaghị enwe Oakley dị ka ọ dị taa n’ihi na ọ kpatara anyị malitere na iko, yabụ o doro anya na ọ bụ egwuregwu dị iche iche na otu mpempe niche.
N'otu oge ahụ, ọ na-enyere anyị aka n'ụzọ iji mee ka anyị bụrụ taa site na ugegbe. Echere m na ihe ọzọ ị na-ele anya bụ otu n'ime usoro ndị ọzọ na mpaghara a, nke bụ Razor Blade. N'ihi na echere m na ọ bụ ezie na nke a bụ akụkụ nke nyeere Oakley aka ịmepụta ya, Razor Blades bụ ma eleghị anya akụkụ ahụ kọwara ya nke ọma, na-apụ na niche ụwa nke ịgba ịnyịnya ígwè na egwuregwu snow na ihe ndị yiri ya ma banye na ngwakọta egwuregwu ahụ, nwere ike ghọọ iko ndụ ị ga-eyi kwa ụbọchị.
Yabụ ọ bụrụ na ịlele Razor Blade na ọ bụghị naanị na a na-eji ya na egwuregwu mana enwere ike eyi ya dị ka ihe kwa ụbọchị. Ma n'ezie n'ime afọ a, ọdịdị nke lens, nko ntị akara ngosi aghọwo isi ihe na nkọwa nke iko egwuregwu. - Ee, m na-ekwu maka na e ji ha mee egwuregwu.
Greg LeMond yi otu ụzọ iji merie Tour de France, ọ bụghị ya, 1989? Ma na kwa ugbu a, Pharrell Williamshad abụwo ọmarịcha di na nwunye nwere ọmarịcha diamond? - Pharrell Williams nwere ọmarịcha ọmarịcha ọla edo, ụzọ ọla edo siri ike nke onye ọkaibe mebere, - Otu ụzọ ọla edo siri ike. - ya mere ọ hụla ebe ọ dị na ọdịnala ọdịnala, akụkọ ntolite na ugbu a, yabụ na nke a bụ oge akọwapụtara maka --- na nhazi nke Razor Blades, nke doro anya na enweghị ya na Eyeshades, mana agba palette na nhọrọ, mbido, dị iche n’etiti ọgbọ abụọ a? - Ee, echere m na ọ bụ n’ezie, Jim ahụghị ohere ebe a na mpempe ntị nwere ike iwepu ma na-agbanwe agbanwe, ihe ọ nwere ebe ahụ ma mgbe ha gara n’ihu na-arụ ọrụ na agụba na ọ nwere nko ntị na-agbanwe agbanwe, mana ọ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịmepụta ngwa ntị nke ọ ga - ere ma ree na ọtụtụ agba, yana ị nwere ike ịhazi ha n'onwe gị. Nke ahụ bụ n'ezie nzọụkwụ mbụ na-eweta nhazi ahụ na ndụ, echekwara m na ọ bụ ya mere Razor Blades ji bụrụ n'ezie, ọ ghọkwara ihe ngosi n'ihi na ọ bụghị naanị na arụmọrụ ahụ mere n'ime ya, kamakwa inwe ike ịhọrọ na họrọ okwu onwe onye, ​​agba na ọdịdị ya na ihe ndị ọzọ. - Ọ dị mma, gịnị ka anyị na-agagharị mgbe ahụ? Nke atọ kachasị mkpa di na nwunye.- Echere m na ọ bụrụ na ị gbadaa usoro iheomume, ọ ga-amalite site na Mumbo M-Frame naanị n'ihi na nke ahụ bụ mmalite nke ụdị ọdịdị a ziri ezi, ụdị torque, nke dị ka okirikiri karịa nke cylindrical Ọdịdị ebe a ka ọ bụkwa mmalite echiche banyere ụdị lens dị iche iche nke mere na ọ bụ ụdị square dị n'oge anyị na-eme nke a wee chee maka etu esi adaba na ihu mmadụ? Yabụ otu n'ime ihe Jim na-amasịkarị, echiche a nwere isi okwu atọ nke nyere aka kọwaa ọdịdị ebe hookier ahụ gafere, anyị gara na ntị ntị kwụ ọtọ na nke ahụ bụ n'ezie ihe gbasara ya ịmalite echiche ahụ ọ gaghị lee anya gị na ọ bụrụ na ọ nọ ọdụ azụ ebe a ọ ga - anọdụ isi ihe abụọ ahụ n'akụkụ ebe a na imi gị ma nwee echiche a nke isi okwu atọ, nke kpatara ya, mgbe ị na - ele okporo osisi ndị ahụ, ha nwere hama stalked, nwere ihe na-akpalite, nwere ọdịdị na ntụziaka ahụ, ebe na M-etiti ị na-ahụ osisi ahụ na-apụta ma laghachi azụ na nke ahụ bụ n'ezie echiche nke ihe kwesịrị ekwesị nke dị ebe a na-ejide isi gị kama ịdabere na ihu gị - Ọ dị mma, yabụ olee ebe anyị ga-aga? Site na M-Frame ka - Nke na-esote m bụ ka ọ ga - abụ na ọ nweghị nnukwu ebe ọdịnala na akụkọ ntolite, mana ọ nyeere obere aka ịnweta ebe anyị nọ taa, ọ bụ n'ezie, o doro anya maka ụwa ịgba ígwè, ị maara Jacket Jacket ọtụtụ, mana ọ bụ nke a ka anyị mere maka Atmosas, ngalaba ụlọ ọrụ na Australia ma ọ bụ Japan. na ihe gbasara ya bụ, nke a na-enwu gbaa n'ọchịchịrị, agba ahụ niile, agba agba, agba sọks, agba agba agba agba n'ọchịchịrị.
O doro anya na n'oge ahụ ị na-ekwu maka ya, achọrọ m ikwu n'oge ma ọ bụ 2010, azụ mgbe anyị mere nke ahụ, ma ọ bụ na njedebe 2000s. O doro anya na ọ dịghị mfe ịme ihe dịka nke a na iko, kwa, enwere ọtụtụ nkọwa dị na ya, a ga-eji aka ha fesa ihe ndị a, n'elu nke ahụ, nke mere na agba nke na-enwu n'ọchịchịrị anaghị apụ apụ, na n'otu oge ahụ nkọwa anyị na-etinye na obere Aee zọọ na kposara ebe ahụ. Nke ahụ nyeere anyị aka ịtọ ụda ka anyị na-agbanye ókè n'ihe ndozi ọzọ ma na-amalite iweta ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ n'ụwa ma were ya n'ọkwa ọhụrụ.
Ọ bụ ụdị ezigbo akara ngosi mara mma mara n'ihi Geraint Thomas ka na-ejikọ otu na-egosi ọkọlọtọ. - Ọ ka na-eyi taa - A na-anwa gị imere ya azịza maka otu afọ na afọ a? - Oh, ọ na-aga azụ na-apụta. Echere m na unu bụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè ka ị mara na ọ siri ike mgbe ụfọdụ, dịka Ọ bụ ezie na anyị na-anwa ime ka ọdịdị ahụ ka mma, iwebata teknụzụ ọhụụ, ọ na-esiri ụfọdụ ụmụ nwoke ike ịhapụ nke ahụ mgbe ọtụtụ afọ nke iyi nke ihe dị ha mma na ya mere ka anyị lelee otú anyị nwere ike iri uru nke eziokwu ahụ bụ na ọ ka na-yi a ọduọ jaket na-eche ụzọ dị ka, dịkwa mma, nke ọma, kama dị nnọọ iji ẹdude akara, nhọrọ bụ n'ebe ime ihe na ya ma ọ bụ ime ihe pụrụ iche maka ya, ma ọ bụ kedu ka anyị si eku ume ndụ ọhụụ n'ime Jacket Racet? Gịnị bụ nhọrọ? - Ee, dịkwa mma, jụụ.
Ọ dị mma, yabụ site na mmekorita Super Limited Edition, kedu ebe anyị ga-esote? n'ihi na emere ya ka ọ bụrụ oke mbipụta maka Japan. Echere m na otu ihe nwere pl
Obi m bu ihe anyi mere na Olimpik na Korea, nke ahu bukwa Harmon Fade. Ya mere, anyị na-anwa ịnwe agba maka ndị egwuregwu anyị na egwuregwu Olympic niile, ma ọ bụ oge ọkọchị ma ọ bụ oge oyi. Anyị mere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ egwuregwu ole na ole n'oge oyi, na Rio anyị nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a, mana echere m na nke ahụ bụ ihe pụrụ iche nye m.
Ọ bụ ezie na ndị otu m na-arụ ọrụ ya oge niile, echere m na nke a nwere ọnọdụ pụrụ iche n'obi m n'ihi na mụ onwe m rụrụ ọrụ na ya n'onwe m. Yabụ nke a bụ ihe eji akpachasị anya na mbụ na-ese ihe anyị chọrọ ime, kpọm kwem na 50-50, yin na yang anya nke etinyere na ụgbọala m, naanị ihe mpempe akwụkwọ, nke emere iji chee maka ihe anyị na-aga Olimpik nwere ike ịme. - Nke ahụ ga-abụ ọkọlọtọ obodo dị jụụ, ọ bụghị ya? Udiri Harmony Kwụsị. - Ee, kpọm kwem, ee.- Echere m na nke ahụ ga - abụ, ee, ee.- Bụrụ ọkọlọtọ anyị. - Ee, ka anyị gaa .Okay, ọ dị mma, yabụ anyị kwuru ọfụma maka ụdị agba dị iche iche amachibidoro - Mpempe ọzọ nke Echere m na nyeere m aka ikpebi ebe ika nwere ike ịga bụ n'ezie na echiche si Frogskins Lite.
Mgbe ụfọdụ ana m eche na ihe ha na-ele ebe a bụ na enyo enyo ga-adị ka arụmọrụ. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ugbu a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị si n'ụwa a, ị maara na ọ bụghị ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ụdị ndị ama ama na-agba na Tour de France na ha abụghị ụdị okpokoro carbon niile. Enwere ọtụtụ ụmụ okorobịa nọ ebe ahụ ma ụmụ okorobịa na-agba ịnyịnya carbon carbon, ụmụ nwoke na-agba ịnyịnya aluminom, ụmụ nwoke na-agba ígwè, ụfọdụ ndị na-eji ya, ee iji gaa nnukwu kọfị ma ọ bụ ihe ọ bụla, ụfọdụ ndị na-aga mpaghara na-aga ahịa, na ọ bụrụ na ị na-ekwu maka ya, ma ọ bụ naanị iji nweta ọrụ na njem, yabụ ọ bụrụ na ị na-ekwu maka ya, kedu ihe Oakley nwere ike ịnọ ebe ahụ? Okwesighi ịbụ na mgbe m ga-agba ịnyịnya ígwè aga m eyi ihe dịka m na-agba Tour de France.
O nwere ike ịdị ka, nke ọma, m na-agba ịnyịnya igwe mana mgbe ụfọdụ naanị m chọrọ ịga ije, achọrọ m ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị a mana ekwesịghị m iyi ka m na-agba - Cool. Ọ dị mma, nọrọ otu Di na Nwunye ọzọ, ndị a ka ọtụtụ n'ime ndị na-ekiri anyị agaghị ama.- Ee, silhouette ahụ, ha yiri M-frame ma ọ bụ igwe nyocha, mana nke a bụ otu n'ime iko ndị agha anyị. Chee echiche mgbe ndị agha mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike ịbụ isiokwu dị nro, n'otu oge ahụ ọ bara uru dị ka ika, ma gị eche, dịka onye na-emepụta iko, gịnị ka iko pụtara? Echere m na m nwere ohere nke m ịchọpụta n'ihi na otu oge anyị gara ụlọ ọgwụ ebe a na United States na-emekọ ihe banyere ndị agha anyị ndị si mba ofesi lọta ma nwee ụdị mbepụ ụfọdụ.
Ya mere, anyị gara ịhụ ya ma anyị gara n'ọnụ ụlọ onye agha ahụ ma ogwe aka ya abụọ tụfuru wee banye na ọ maara na anyị si Oakley wee sị, 'Ana m ekele gị maka ihe ị na-eme' are na-anọdụ ebe a na-agwa nwoke a okwu ịdọ aka ya na ụkwụ ya abụọ. ' Ekele, ekele maka ihe ị mere. 'Ma ihe ọzọ nwere ike gbanwere echiche m banyere ihe anyị na-eme nke ukwuu, mana ọ sịrị,' Echere m na ị ghọtaghị ihe ị na-eme. 'O kwuru, sị,' Aka m abụọ efunahụ m, ha ga-enyekwa m ogwe aka ọhụrụ, mana ọ bụrụ na enweghị m Oakleys m, agaraghị m ahụ ụzọ, agaghị m ahụkwa nwa m nwanyị ọzọ nke pụtara na anyị nwere ike ịnwe ndụ nke ịgbanwe onye nwere iko ma chee echiche banyere ihe anyị na-eme, oh, m dị mma na agba a ma ọ bụ ihe ndị dị ka nke ahụ na ihe ndị na-aga n'ihu mana ihe niile nwere ike ịnwe n'ahụ gị ugbu a dochie anya ya. anya ka bu nani ihe inwereghi ike dochie anya, ma mgbe ichoro banyere ya anyi na anuru ihe dika, oh, udi a adighi nma r udi a dikwa nma ma obu m na adi ka onye oyi na ya, i gha agbanwe igbanwe ndu mmadu na karisia n'ime ụwa dị ka ịgba ịnyịnya ígwè ebe ọ dị, ànyị na-eche maka ugogbe anya maka anwụ dị ka anwụ mgbe anwụ na-awa ka m nwere ike ịhụ ụzọ? banyere mmadụ ole na-anya ụgbọala n’abalị, ma ọ bụ ị bido draịva tupu ọdịda anyanwụ ma ọ bụ kwụsị draịva gị mgbe ị gachara, ma ọ bụ ị bido draịva tupu ọwụwa anyanwụ wee kwụsị ụgbọala mgbe anyanwụ dachara ma chee na anwụ anaghị acha ka m hapụ iwere enyo m mana ị na-eche maka ya, chaị ma ọ bụrụ na a gbue okwute n’ọchịchịrị? I nweghi ike ihu okwute a n’uzo.
O siri ike ịhụ mgbe ọkụ na-adịghị. Ma lee ka o si dị mfe ịma jijiji, ma ọ bụ naanị ị na-anya ụgbọ ala, ma ọ bụ ụgbọ ala na-agafe, ma ọ bụ na ị nọ n'ìgwè nke mmadụ ise ma onye na-akwagharị n'oké nkume, nke nwere ike ịgbanwe ndụ gị n'ụzọ nkịtị.- Ee, ọ bụ akụkọ metụtara ekwesighi ikwu okwu banyere iko mgbe obula igba igwe.
Dị ka ha na-ekwu, ọ dị mfe iji uche gị na-arụ ọrụ nke iko ndị ahụ n'onwe gị ma ọ bụ ụdị ha, mana n'ezie eziokwu ahụ bụ na anyị kwesịrị iyi ha na mbụ, gburugburu anya anyị - Nke ahụ bụ ihe Jim na-ekwukarị. Anyị na-eme ugogbe anya maka anwụ, anyị na-echebe anya. Nke ahụ bụ n’ezie ihe kpatara ị ga-eji hụ ụfọdụ ihe ị hụrụ na nnwale mmetụta na ihe ndị dị otú ahụ.
Anyị nwere ike ịnọdụ ala ma gaa, nke ọma, ọ dịghị onye ga-agbapụ m egbe egbe, maọbụ ọ nweghị onye m ga-atụba kilogram anọ na ihu m. N'otu oge, ọ naghị ewe pound anọ iji gbochie echiche gị. Ọ na-ewe nnukwu okwute a kụrụ aka nke nwere ike ime ka ị kpuo ìsì ruo mgbe ebighi ebi dị elu Mmetụta dị elu dị elu nwere ike iyi oke, ọ ga-abụ ihe na-erughị ihe nwere ike iwepụ anya gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị gafere igwe na ịnya n'okporo ụzọ ma ọ bụ ikwu okwu banyere ihe ndị ahụ niile, ịgba ugwu. ka anyị mee ka ị banye n’okporo ụzọ nke na-ekpofu unyi n’ihu gị na ị ga-ewepụ iko gị n’ihi na anwụ adịghị.
Ọ dị ka ịrapara ihu m n'azụ wiil ma tụfuo gị ihe. Ọ bụ n'ezie banyere anya nchebe. - Ee, ozi ikpeazụ dị mkpa mgbe ekwusịrị ụdị, arụmọrụ, ụdị na, ugbu a, nchebe.
Mee ka anyị mata n’ajụjụ ndị a n’okpuru nke n’ime ndị a bụ ọkacha mmasị gị ma ọ bụrụ na ọkacha mmasị gị anọghị ebe a, ị ga-enyerịrị nnukwu mkpịsị aka aka na ekele Brian. Ọ dị ezigbo mma ịgwa gị okwu. - Daalụ, enwere m ike ịnweta ihe a.
Kedu agba agba Oakley dị mma maka baseball?
Na iche iche nkeanyatints nyere site ika-enyere ndị mmadụ aka ịhọrọ onye nkekacha mmana-aza ebumnuche na mkpa ha pụrụ iche. Black iridium, ọchịchịrị isi awọ na ọla kọpa na-ewu ewuanyatint nhọrọ makaugogbe anya maka anwụmakabaseballndị na-egwu egwuregwu, ka ha na-enye ọdịiche dị ukwuu yana ịba ụba ọgụgụ isi.Eprel 3 2014
Yabụ ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịkwọ ụgbọala n'abalị mgbe ahụ ị nwere ike ịnọ na-eche maka enyo ọhụụ abalị. Ndị a bụ anya edo edo na-ekwu na ha na-enwu gbaa ma belata ncha, mana ha na-arụ ọrụ n'ezie? site na dr ahụ ike na-egosi iji nyere gị aka ịmụta ihe niile banyere ọhụụ anya ma chọta ngwaahịa ọhụụ kachasị mma. Yabụ ọ bụrụ na ịnọ ebe a na ọwa ahụ, pịa bọtịnụ ịdenye aha n'okpuru ka ị ghara ịchefu ihe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu m na-ekwu maka enyo ọhụụ abalị ma ọ bụ enyo anya ụgbọ ala nke gbara gburugburu nwa oge, na mbido mbụ ha pụtara dị ka ugogbe anya maka ndị mmadụ, ndị ga-aga ịchụ nta maka nnụnụ ma ọ bụ agbapụ nkọ, tinye ihe ndị a pụrụ iche na-acha odo odo ma ọ bụ oroma n'ihi na ụdị ụyọkọ a na-eme ka ọdịiche ahụ dịkwuo ntakịrị ma na-enyere gị aka ịhụ ihe ndị dị anya dị mfe karịa nke a n'abalị. enyo anya A na-akpọsa ya n'ịntanetị n'ọtụtụ ebe ma nye ya ọdụ gas na ntanetị.
Otu ha kwesiri isi rụọ ọrụ bụ na anya edo edo na-enwusi ike ntakịrị ka ị wee nwee ike ịhụ ntakịrị mma n'abalị, ha nwekwara ụfọdụ atụmatụ iji belata nchapu ka ị ghara inwe nnukwu nsogbu na ọkụ ọkụ na-abịanụ. , ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eme ya n'ihi na ihe na-aghọwanye ọkụ ndị ọzọ. Get nweta ọkụ ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo mgbe ị na-eche m ma ọ masịghị m. Ihe mbu nke na-akpasu iwe bu na iko ndi a na-achoghi n’ebe di iche iche enweghi ike ime ka ihe di nma n’ihi na ha ghaghi oke oke nke na-abanye n’ime anya, ma ha na-eme ka onye mmadu buru mmadu n’ile anya na ihe di nma n’ihi na o were ihe nile Igwe na-acha anụnụ anụnụ na-ewepụ nke ahụ ma na-eme ka ọ dị mma ka ihe niile na-acha odo odo na-achakwa ọchịchịrị ka ị na-agbada n'okporo ụzọ gbara ọchịchịrị, enweghị ihu igwe ma ọ bụ ọbụna ihe ọ bụla ọzọ? Arsgbọ ala ndị na-anya n'eziokwu ga-eme ka ihe siwanye ike ịhụ, mana n'ihi mmetụta ọkụ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwọ ụgbọala na chi ọbụbọ enwere ike ị nwee snow ma ị ga-enwe ọtụtụ snow gosipụtara na ihe na-acha uhie uhie, mgbe ahụ ị maara na ụdị mmetụta? Anya m ndị a na-eme ka ihe pụta ìhè na ọnọdụ ndị a ma ọ masịrị m iyi ha, dịka ọ dị na mgbede ma ọ bụ ọnọdụ ụtụtụ na obere ọkụ.
Ọbụna m jiri ya tụnyere ya mgbe m na-anya ụgbọ ala, na-etinye ha ma ọ bụ na-ewepụ ha, ma chọpụta na ha na-eme ka ọdịiche ahụ dịkwuo mma, ma ọ bụrụhaala na ọ na-eme ka ihe dịkwuo mfe n'abalị, enwere m mwute ma ọ bụghị ihe a na-ekwu dị ka nnukwu ọkụ ihu na-eche, echere m na nke ahụ na-enyere aka. Enwere m mmetụta nke ọma na onwe m, enwere m mpụga oge ole na ole n'afọ ma mmetụta izugbe nke ọkụ ọkụ ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-ewe iwe, yabụ ma ọ dịkarịa ala, ha na-acha odo odo karịa ọkụ ụgbọ ala ochie site na 1970s, ma ọ bụrụ na ị chetara ihe nke ahụ dị ka um dị jụụ maka ụfọdụ ụdị ndị dị ebe ahụ, ma ị na-azụ iko pụrụ iche, na-enweta ihe osise dị ka ndị a, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ agba odo na iko gị mgbe niile, ndị a nwere nzacha na-agbanwe agbanwe, ọ bụ ọ bụghị 100 dị ka ugogbe anya anwụ, mana ọ nwere nzacha ahụ na-ebelata ncha ihu mgbe ị na-ele ebe mmiri dị na mmiri dị ka okporo ụzọ gbara ọchịchịrị dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ma eleghị anya na-ele mmiri na-agba ọsọ na-ezu ike n'okporo ámá mmiri wee wụpụ ma maa ụra n'anya gị. enwere ike igosi gi ihe a n'ihi na komputa m nwere nzacha n 'azu m ma i gha hu ma oburu na m gbanye ya 90 degrees i nwere ike ihu na o na acha odo odo na nke ahu bu n'ihi na komputa na-acho polarizing na filter polarizing and glasse ugbu a enwere ikike, yabụ ugbu a enwere m ihe ụfọdụ ndị mmadụ gụrụ gbasara isiokwu ndị gara aga nke kwuru na ugogbe anya ịkwọ ụgbọala n'abalị na-enyere ha aka ịkwọ ụgbọala nke ọma n'abalị. Agbanyeghị, tụlee ihe ọmụmụ emere na nso nso a site na 2019, bụ nke a nwalere isiokwu iri abụọ na abụọ na-enweghị ma a na-anwale ugogbe anya abalị n'abalị na simulator ịkwọ ụgbọala na enyo anya abalị na-egosighi mmụba ma e jiri ya tụnyere naanị anya m doro anya, nke na-eweta ọtụtụ obi abụọ na ụmụ mmadụ a na-enyere hụ mma ma enwere m ike ikwenye na ha na-enyere ndị mmadụ aka inwe ahụ iru ala karịa ka m nwere ndị ọrịa batara ma jụọ ma ha nwere ụdị iko a dị iche iche iko dị iche iche maka ịkwọ ụgbọala n'ihi na ọ na-enyere ha aka n'ezie, mana n'otu oge ahụ enwere m ndị nwara ha, ajụrụ m onwe m ma ha sị mba, ha anaghị enyere ha aka, yabụ aga m enye gị ya na nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ịnwale enyo ọhụụ ọhụụ nwere, biko mee ka m mara ma ọ bụrụ chee na ọ na-enyere aka n'ezie, mba, gịnị bụ echiche gị banyere ya maka onye m bụ? Imirikiti ndị ọkachamara n'ọrịa anya ọzọ na-atụ aro na ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịkwọ ụgbọala n'abalị, tụlee ihe dị n'ihu gị.
Gbaa mbọ hụ na ihicha anya ihu ikuku gị ka ikuku ikuku gị ghara inwe nsị na mmanụ ọ bụla, ma ọ bụ n’ihu ma ọ bụ n’ihu. Azụ windshield Ọ bụrụ na ị na-eyi ugegbe anya, gbaa mbọ hụ na ha dị ọcha ma dọrọ tụlee ịnwe mkpuchi mkpuchi na-adịghị mma na iko ndị a nwere ike inyere obere aka ma gbaa mbọ hụ na nnukwu ọkụ ihu gị dị ọcha n'ezie, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere Nsogbu mgbe ọ dị gị ka ihe ọ bụ naanị ọtụtụ gbara ọchịchịrị ma ị nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla, gbalịsie ike ka ọkụ ọkụ gị dị ọcha n'ihi na ha na-enwekwa unyi mgbe ụfọdụ, ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọhụụ gị na-agbanwe na abalị gị ịkwọ ụgbọala na-aghọ ọnweghị nchedo, yabụ na ị naghị enwe ntụsara ahụ ịkwọ ụgbọala gbaa mbọ hụ na ị gara ileta ophthalmologist anyị n'ihi na enwere ọnọdụ anya ụfọdụ nke nwere ike ibute nsogbu ọhụụ n'abalị. Mgbe ihe dị ka nwute anya na ọbụnadị nsogbu mmebi agwa gị ọzọ na onye ophthalmologist gị, kwue maka mkpebi ikpeazụ m.
Ha na-arụ ọrụ n'eziokwu, enwere m obi abụọ na echeghị m na ha na-arụ ọrụ n'ezie mana amaara m na ha nwere ike inyere ụfọdụ ndị aka wee chee na ọ bụrụ na ị dị mfe? enwe mmetụta ọsọ ọsọ ị nwere ike ịnwale ha mana atụla anya na ha ga-eme ka ihe dị mma ma ọ ga-adị ka ehihie hey ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a kụrụ bọtịnụ dị ka m hapụ ikwu ma ọ bụghị ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele Iji lelee ndị ọzọ jụụ etiti Friday reviews ebe a si dr anya ike ị nwere ike pịa ma ọ bụ kpatụ ihuenyo ebe a ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ile ihe ọzọ dị mma site na ahụike m ị nwere ike ịga n'ihu wee pịa ihuenyo ebe a ma ọ bụ pịnye hey ekele maka ilegide anya na ya ma anyị ga-enwe nkata na gị n'oge na-adịghị anya
Ndi Oakley overpriced?
Oakleyna-anọdụ ala n'otu ọnụahịa ọnụahịa dịka Ray Ban. Ha anọghị ebe ahụ maka ọnụahịa nwere ụdị dị ka Chanel, Tag Heuer, ma ọ bụ Persol. Agbanyeghị, ha karịrịdị oke ọnụkarịa ndị na-abụghị onye mmebe osisi, Elezie.Oakleyeyewear bụ (dịtụ)dị oke ọnụn'ihi ihe abụọ.
Kedu nke ka mma Oakley ma ọ bụ Ray Bans?
Gbasara Anya.Oakleyugogbe anya maka anya m nwere nnukwu ihe ngosi, mana ma a bịa n'ịtụle ha na anya kristal ma ọ bụ nke iko, ha enweghị ike itiRay-Mmachibido iwundo. Ahịa.Oakley siprice larịị bụ na pa naRay-Mmachibido iwu, ewezuga mgbe a bịara ịtụgharị ha na ugogbe anya maka anwụ.June 9. 2018 Nov.
Oakley ọ ka mma karịa Rayban?
Gbasara Anya.Oakleyugogbe anya maka anya m nwere anya dị ukwuu, mana mgbe ọ bịara iji ha tụnyere kristalma ọ bụanya iko, ha enweghị ike itiRay-Banndo. Ahịa.Oakley siprice larịị bụ na pa naRay-Ban, ewezuga mgbe a bịara ịtụgharị ha na ugogbe anya maka anwụ.June 9. 2018 Nov.
Ndi Prizm ka ya nma?
OakleyPRIZM Na-agbasalenses dị mma maka mbelata ọkụ ma kwado maka ọrụ mmiri ma ọ bụ ịkwọ ụgbọala. E wezụgaPRIZMMmiri miri emi naPRIZMNa-emighị emi Water, naPRIZMegwuregwu anya m abụghịịgbanwee.Bọchị 18 2021
Kedu ihe kpatara ugogbe anya maka anwụ ji dị njọ maka baseball?
Anya elekere anyaakwadoghi maka egwuregwu bọọlụ n'ozuzu ya, mana ọ kachasịbaseballna goofu. Yabụ, mkpuchi enyo na lens ziri ezi na-emekwu iji bulie ọhụụ.Mgbasawanyenwekwara ike imetụta nghọta gị dị omimi ma si otú a mee ka o sie ike ikpe ikpe kpọmkwem ebe bọọlụ ahụ metụtara gị.Ọkt 14 2018
Ezigbo Oakleys kwuru Mere na China?
Oakleyna-enyocha mmepụta oge niile ma na-anwale ihe dị iche iche site na ụlọ ọrụ ya niile iji hụ na ọ kachasị mma. Ya mere mgbeezigbo OakleysEnwere ikemerena America, o yikarịrị ka ụbọchị ndị a ka ha ga-adịemebere na China.